Firefox 58 ichatsigira zvinofambira mberi zvewebhu uye iyo FLAC codec | Linux Vakapindwa muropa
Firefox 58 ichatsigira zvinofambira mberi zvewebhu uye iyo FLAC codec
Pane pasina mubvunzo izvozvo Firefox iri kukura nekukwakuka uye nezvikamu uye pamusoro pezvose vakurumidzisa kumhanya kweshanduro nyowani nyowani, mazhinji achovashandisi vakanakidzwa neshanduro yayo 57 mejor inozivikanwa seQuantum.
Pakati pezvirongwa izvo timu yekusimudzira yeFirefox ine vhezheni itsva yavari kushanda nayo Vaburitsa zvimwe zvakakosha zvakakosha zvichagadziriswa mukuburitswa kwavo kunotevera.
Mune iyi vhezheni itsva se Yakanga yatove yakarongwa kare, yaive tsigiro yekufambira mberi webhu kunyoreraKune avo vachiri kuziva iyi pfungwa, ini ndichataura zvishoma nezvayo.
Iyo PWA kana sezvandataura Kufambira mberi webhu kunyorera zvikumbiro zvakagadzirwa nehurongwa neanoteerera dhizaini.
Pfungwa yaanoburitsa iyi dudziro ndeiyi:
Kuti ine yakanyanya kuita panogona kuitika pamashure uye kuti inobhadharisa ingangoita pakarepo
Iyo yakanaka interface inotaridzika sepedyo sezvinobvira kune yemuno
Iko kugona kushanda pasipo
Kukwanisa kutumira notices kune vashandisi, senge chizvarwa app
Kune rimwe divi, imwe nhau yatinayo yeFirefox 58 ndeye browser yekuverenga neFLAC odhiyo codec.
Kunyangwe kubva pakuona kwako kwekupedzisira kunofanirwa kunge kwakaitika kwenguva yakati rebei, nekuuya kwekushambadzira masevhisi, kuenderana kwemabhurawuza ane akasiyana odhiyo nemavhidhiyo codecs anofanirwa kunge ari padanho.
Parizvino patinokwanisa kuwana iyi vhezheni yeFirefox mune yayo beta vhezheni, zvinotarisirwa kuti ichakwenenzverwa uye kugadzikana kusvika gore rinouya saka tatova nemavhiki chaiwo kubva payakatangwa.
Pasina zvimwe, isu takamirira izvo zvakarongwa nechikwata chekusimudzira nhungamiro yebrowser.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Firefox 58 ichatsigira zvinofambira mberi zvewebhu uye iyo FLAC codec
Ko zvekare Firefox OS zvishandiso zvinoshanda?
firefox inofanirwa kumira kuvharira, izvo uye kumisa kugadzira vhezheni yapfuura isingawirirane newedzero